icra nepal(icra nepal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमीटेडले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावितका लागि जारी गर्न लागेको रु. ३७ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड फोरको रेटिङ प्रदान गरेको छ। इक्राले औसतभन्दा तल आधारहरु जनाउने ग्रेड फोरको ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको हो । इक्राले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ,...
मैलुङ खोलाको रु.७.३६ करोडको आइपीओलाई सबैभन्दा कमजोर ग्रेडिङ्ग
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको ७ करोड ३६ लाख भन्दा बढी रुपैयाँको आइपीओलाई इक्रा नेपालले भनेगे्रड फाइभ(५)को ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ कम्पनीको अवस्था औसत भन्दा कमजोर छ भन्ने हो । धितोपत्र बोर्डले ग्रेड फोरसम्मका कम्पनीले मात्र आइपीओ जारी गर्न पाउने गरी धितोपत्रको...
साञ्जेनको रु. ५४.७५ करोडको आइपीओलाई फोर प्लसको रेटिङ
काठमाण्डौ । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमीटेडले निश्कासन गर्न लागेको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोर प्लसको रेटिङ दिएको छ । इक्रा नेपालले औसत भन्दा तल आधारहरु जनाउने ‘इक्रा एनपी आइपीओ ग्रेड फोर प्लस’को रेटिङ प्रदान गरेको हो । इक्राले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ, जसमा ग्रेड १ ले...
व्यवसाय बिस्तारमा सिम्रिक एयर आक्रामक बन्ने, स्थानीय र विदेशी मुद्रामा १.३२ अर्ब ऋण लिंदै
काठमाडौं। सिम्रिक एयर प्रालिले व्यवसाय बिस्तारका लागि लिन लागेको ऋणको रेटिङ गराएको छ । इक्रा नेपालबाट सिम्रिकले आफूले स्वदेशी मुद्रा र अमेरिकी डलरमा लिन लागेको ऋणको रेटिङ गराएको हो । सिम्रिकले स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा गरेर एक अर्ब ३२ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिने भएको हो। इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले स्वदेशी मुद्रामा...
चौतारी लघुवित्तको आइपीओलाई कमजोर रेटिङ, लगानीअघि सोच्नुपर्ने
काठमाण्डौ । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रही विभिन्न १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको चौतारी लघुवित्तले निश्कासन गर्न लागेको ५ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड फोरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ कम्पनीको अवस्था औसत भन्दा कमजोर छ भन्ने हो । इक्राले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ, जसमा...
शिवम् सिमेन्ट्सको आइपीओलाई इक्रा नेपालको थ्री प्लसको रेटिङ, अवस्था औसत
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमीटेडले जारी गर्न लागेको २ अर्ब २ करोड ४० लाख मूल्यको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड थ्री प्लसको रेटिङ प्रदान गरेको छ । इक्रा नेपालले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शिवम् सिमेन्ट्स लिमीटेडले प्रिमियम मूल्यमा निश्कासन गर्न लागेको आइपीओलाई औसत आधारहरु जनाउने रेटिङ दिइएको प्रष्ट पारेको छ । यसको...
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले निश्कासन गर्न लागेको ३५ प्रतिशत हकप्रदलाई इक्रा नेपालले औसत आधारहरु जनाउने आइपीओ ग्रेड ३ प्लसको ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ । यो ग्रेडिङले कम्पनीको आधारभूत अवस्था औसत रहेको भन्ने देखाउँछ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले निकट भविष्यमै २२ करोड ४४ लाख ९७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निश्कासन...
गुराँस लाइफको हकप्रदलाई कमजोर ग्रेडिङ
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले जारी गर्न लागेको हकप्रदलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रोड फोरको ग्रेडिङ दिएको छ । आधारभूत भन्दा कमजोर अवस्था भएको जनाउने आइपीओ ग्रेड फोरको ग्रेडिङ दिइएको इक्रा नेपालले जनाएको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले निकट भविष्यमै १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल २९ करोड ७०...
देव बैंकको हकप्रदलाई कमजोर ग्रेडिङ, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । देशको एक मात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले देवः विकास बैंकले जारी गर्न लागेको हकप्रदलाई कमजोर ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ । आधारभूत अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीलाई दिइने आइपीओ ग्रेड फोरको रेटिंग यो बैंकको हकप्रदलाई इक्राले दिएको हो । इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ, जसअन्तरगत १ ले बलियो...
अपर–तामाकोशीको २.६२ अर्बको आइपीओलाई ग्रेड फोरको रेटिङ, बुझेर मात्र लगानी गर्नु ठीक
काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजारको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै कित्ताको रुपमा निश्कासन हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड फोरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमीटेडले जारी गर्न लागेको २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख मूल्यको...
सिनर्जीको हकप्रदलाई ग्रेड ५ को रेटिङ, अवस्था सबैभन्दा कमजोर
काठमाण्डौ । सिनर्जी फाइनान्स लिमीटेडको हकप्रदमा आवेदन दिन सोच्नु हुँदैछ ? त्यसो हो भने तपाईले यो कम्पनीमा गरिएको लगानीबाट खासै ठूलो रिटर्न नपाउन सक्नुहुन्छ । कारण, यो कम्पनीको अवस्था आधारभूतभन्दा कमजोर र समग्रमै सबैभन्दा कमजोर रहेको भन्दै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आउन लागेको हकप्रदका लागि आइपीओ ग्रेड ५ को रेटिङ दिएको...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्सले निश्कासन गर्न लागेको १ बराबर १ अनुपातको हकप्रदलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड फोर प्लसको रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले निश्कासन गर्ने ३० करोड १९ लाख ८८ हजार ६ सय १० रुपैयाँको हकप्रदलाई औसत भन्दा तल आधारहरु रहेको जनाउ दिने रेटिंग प्रदान गरेको हो । कुनै पनि कम्पनीको आधारभूत अवस्था राम्रो भए...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपीओलाई हालसम्मकै उच्च रेटिङ
काठमाण्डौ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ)लाई ‘ग्रेड टु प्लस’को रेटिङ प्रदान गरेको छ । नेपालमा हालसम्मका सार्वजनिक निश्कासनहरुमध्ये यति राम्रो रेटिङ यसअघि कुनै पनि कम्पनीले पाएका थिएनन् । इक्रा नेपालले बैंकका प्रोमोटरको बलियो प्रोफाइल, स्थापित बैकिङ छवि र निकै कम कस्ट...